Cuba - ezweni umbala ezingavamile, amandla amangalisayo. Uma ufuna uphumule futhi ashona ne imizwelo eyakhayo, nakanjani kufanele uvakashele lapha. Uma izivakashi ufuna ukufunda ngamasiko kwabakhileyo Cuba, kufanele ayeke enhloko-dolobha yalo - Havana. Kodwa ngaphambi kokuba athathe uhambo uzoba ukubhuka ikamelo ehhotela, hhayi ukuhlala ezitaladini lapho usufika kuleyo ndawo. Ngisho noma uhlela ukuyisebenzisa ubusuku, nakanjani egumbini, wena ukubala ku induduzo. Havana amahhotela, ubuqili abalithandayo, ukubuyekezwa wangempela izivakashi - yilokhu sizobe ukukhuluma ngo kohlaka into.
Yiqiniso, zonke izivakashi namanje lapho behlela iholidi lakho kuyinto lamukele le imigomo ukuthi ulandelwa. Kuyinto kuzo izoncika kakhulu kukhethwa indawo ukuze uhlale. Amahhotela e Havana (Cuba) umxhwele sibesibumbene: kukhona Villas ukunethezeka, ezindlini kanye izinketho ezengeziwe eziphansi ezindaweni distal.
Havana inezici ezithile ukuthi kumele kubhekwe inqubo kukhethwa ehhotela. Kuyinto idolobha compact, zonke ezikhangayo itholakala ngandawonye. Nge ukutholakala amatekisi value ekhethekile indawo edolobheni ohlala kulo, ngeke ube naso. Noma kunjalo, iningi izivakashi uthanda ukuhlala ku Old Town kanye phakathi nendawo. Lapha ungakwazi ngokuvamile ubone Amahhotela okunethezeka futhi boutiques ezinikeza Havana. Amahhotela ise Old Town, ukunikeza izinzuzo ezithile zabahamba - yokuvuma ukhululekile iminyuziyamu kakhulu. Kodwa nje kudingeka balungiselele yokuthi lapha ungakwazi neze ukuthola kukho isabelomali. Izindleko zokuphila kwansuku zonke emahhotela eHavana iqala ruble 2500 elijwayelekile eliyidabuli. Okuhle isabelomali inketho kungaba amahhotela Casa Armando (3 km kusukela enkabeni yedolobha), kanye House phambi Sea (2,5 km ukusuka edolobheni).
Isikhungo uma iqhathaniswa edolobheni elidala, inikeza amahhotela of Havana, amazinga lapho yelinyenti. Futhi zonke ngoba isakhiwo ugxile ubudala futhi agugile. Uma ufuna ukuphila ngaphakathi ukuhamba ibanga kuzo zonke ezikhangayo yedolobha unesithakazelo amasiko alo kanye nomlando, kodwa une kwemithombo yemvelo elinganiselwe, maphakathi kuyoba okungaba ngcono.
Izindawo ezilandelayo emzini: Vedado wesifunda futhi Plaza de la Revolucion. Lena kancane okungaba ibanga kusuka ngumgogodla ezikhungweni zomsebenzi wesifunda, ukuphi amahhotela nesizotha. Kuyinto onokuthula, ozothile, ngesikhathi esifanayo, uma kunesidingo, ungahlala ukuzihambela baye ezindaweni yisakhiwo sodumo. amaqembu Trip zezivakashi kanye osomabhizinisi bavame ukumiswa ezifundeni Miramar futhi Playa, etholakala imizuzu 10-15 kude isikhungo. Uma ufuna ukuhlala Awukude sezindiza, kufanele wazi ukuthi kukhona amahhotela ambalwa - kungcono ukulahla umbono.
Amahhotela 4 *
Uma ufuna ukuphila ezimweni induduzo, kodwa ungachithi omningi iholo amane aphambili ka Havana. Izibuyekezo basikisela ukuthi iningi labo ukunikela izimo esihle ngempela yokuhlala.
Mhlawumbe ehhotela edume kakhulu enkabeni yedolobha, iyona Inglaterra. Kule minyaka engu-130 edlule kube uye yabakhanga labo bonke abathanda isiko kanye nomlando, nakuba lesikhumbuzo bokwakha kwedolobha like Havana. Amahhotela ne-service best you tando surely thola, kepha uma ukhetha le ndlela, ngokuqinisekile ngeke uzisole.
Bonke abathandi isitayela wamakoloni bayojabulela ehhotela Sevilla, etholakala eduze Museum of Arts of Havana. Kusukela amafasitela of the hotel inikeza imibono obumangalisayo nesimo sesakhiwo esikhulu edolobheni elidala futhi zokungcebeleka zayo edume kunazo zonke.
ukuhlala ebusuku double asesigabeni "ejwayelekile" Uhambo izobiza ruble 23 000.
Amahhotela 5 *
Yini enye esingayenza ukunikela Havana? 5 * amahhotela ukuhlangabezana izintandokazi abalandeli okunethezeka iholide. Esikhumulweni sezindiza esiseduzane kusukela ehhotela, ise-Playa endaweni kuyinto Saratoga. Ukwenza neoclassical inkonzo Excellent - into izivakashi eziningi.
Izivakashi uzobona inhlokodolobha-Cuban zesimanje ephezulu liphumele amahhotela, futhi izakhiwo enkulu. Ngokwesibonelo, eduze University of Havana kuyinto ehhotela okunethezeka Tryp Havana Mahhala, libhekene i ezingeni anda wenduduzo lihle izinga inkonzo. Lena inketho classy ngempela nge namakamelo abanzi futhi elikhanyayo, eliphezulu ukudla kanye nesethi amasevisi angeziwe.
Izindleko zokuphila kwansuku zonke endlini ephindwe kabili nge kwasekuseni ngeke bazisika 21-22 000.
Enikeza Havana? Amahhotela, indawo yabo futhi intengo - isihloko nakanjani ezibalulekile. Kodwa ngokukhetha kukho efanelekayo, ingasicasula ngokunembile indawo edolobheni, kanye kuphela bese ukhetha inombolo ngokuhambisana amakhono sabo sezimali. Ngokuvamile, idolobha izinketho ngokwanele ukuba ivumelane yonke akuthandayo futhi amabhajethi, ngakho izinkinga kukhethwa uma kungavela.
Ukuthenga e Spain: Izici eziyinhloko
Umlobi uFriedrich Gorenstein